Chelsea Oo Guul Ay Ka Gaadhay Tottenham Iskaga Xaadirisay Finalka Carabao Cup - GOOL24.NET
Chelsea Oo Guul Ay Ka Gaadhay Tottenham Iskaga Xaadirisay Finalka Carabao Cup
January 13, 2022 Mahamoud Batalaale
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa sii fadhiisatay finalka Carabao Cup oo ay ku sugayso Arsenal iyo Liverpool midkooda soo gudba, kaddib markii ay laba jeer garaacday Tottenham.
Chelsea ayaa labadii lugood ee semi-finalka Carbao Cup waxay ku karbaashtay Tottenham oo xataa awoodi weyday inay hal gool la timaado labadii ciyaarood.
Garoonka Tottenham Hotspur Stadium ayay Blues u safartay iyadoo kulankii hore kusoo badisay 2-0, waxaana waqti horeba ay heleen gool uu madax ugu dhaliyey Antonio Rudiger, kaas ayaana noqday midka kaliya ee labada kooxood kala saaray.
Thomas Tuchel ayaa rumeeyey riyadiisii ahayd inuu gaadho finalka si uu koobkiisii ugu horreeyey ee gudaha Ingiriiska ah ugu dagaallamo, waxaana ka xigta hal tallaabo oo ah inuu iska celiyo Liverpool iyo Arsenal midkooda soo adkaada.
Daqiiqadihii 7aad illaa 11aad ayay Chelsea heshay saddex fursadood oo ay difaaca Tottenham iska caabiyeen, qaarkoodna ay goolka dul-mariyeen.
Kubbad koorne ahayd oo uu Mason Mount kasoo qaaday dhinaca midig daqiiqaddii 18aad ayaa waxa madax ku qabtay Antonio Rudiger oo daba mariyey goolhaye Gollin, sidaas ayaanay Chelsea ku heshay goolka madiga ah ee ay guushu ku raacday.
Garsoore Andre Marriner ayaa rikoodhe u ku qaaday Chelsea waxyar ka hor intii aan loo bixin waqti nashashada markaas oo uu Rudiger qalad ku galay Hojbjerg, hase yeeshee VAR ayaa meesha ka saartay go’aanka garsooraha sababtoo ah qaladka ayaa ka dhacay laynka dushiisa, waxaana Tottenham la siiyey laad xor ah oo ay iska khasaariyeen.
Bilowga qaybta dambe ayaa mar kale Tottenham loo dhigay rikoodhe markaas oo uu goolhaye Kepa xerada ganaaxa dhexdeeda ku riday laacibka reer Brazil ee Lucas Moura, waxaase mar kale Chelsea badbaadisay VAR oo muujisay in Moura aan lagu gelin qalad balse uu isagu jiidhay lugaha goolhayaha reer Spain.
Kepa ayaa dhamaadkii waxa uu badbaadiyey kubbad halis ahayd oo uu Sessegnon kusoo liishaamay, sidaas ayaanay ciyaartu ugu soo dhamaatay 1-0 ay guushu ku raacday Chelsea.